Umkhiqizo wezinkukhu ezingavalelwe nezinkukhu zemvelo
Ngesikhathi sokubhala iNingizimu Afrika kwakungekho umthetho olawula ukubhaliswa kwemikhiqizo yezinkukhu ezifuywa zivalelwe noma ezifuywa zingavalelwe. Uma kungekho imithetho, iningi labadayisi nezitolo liye lazakhela izindinganiso zazo lapho umkhiqizo kufanele ulandele ukuze kushiwo lokho.
Iqembu lase Ningizimu Africa labafuyi bezinkukhu (South African Poultry Association) iye yazakhela izindinganiso zayo ezincane zokuqondisa ukukhiqizwa kwenkunkhu zokudla kanye nenkukhu zokubeka amaqanda. Ngokwekhodi Yabo Yokusebenza, zonke izinyoni, noma zikhuliswe ezindlini, amakheji, noma ngokwemvelo, kufanele zikwazi ukufinyelela ezinhlanzweni eziyisihlanu eziyisisekelo ezivezwe yiWorld Animal Organization. Lezi zi:
akufanele zilambe, kufanele zidle kahle futhi zibenamanzi okuphuza
Inkululeko kuze zingesabi nokucindezeleka ngokunikeza izimo nokukhathalela okugwema ukuhlupheka okungadingekile
Ukukhululeka kwendawo yokuhlala njalo zikwazi ukunethezeka
Ukukhululeka kusuka enhlungwini,ukulimala kanye nezifo ngokuhlinzekwa kokuvimbela okufanele noma okunye, ukuxilongwa okusheshayo nokwelashwa kwezifo ezivamile
Inkululeko yokuzikhethela ukuveza amaphethini avamile okuziphatha kwezilwane, ngokunikeza indawo eyanele kanye nokuba nezilwane ezifanayo
Ukukhiqizwa kwezinkukhu ezifuywa zingavalelwe
Ukuze inkukhu ezifuyelwe ukudla zibhekwe njengezifuywa ezingavalele (amaFree Range),i-Broiler Production Code of Practice (inhlangano ebhekane nekhodi yokuziphatha kwabafuyi benkukhu ezifuyelwe ukudla) ichaza ukuthi izinyoni ezingaphansi kweziyishumi nanhlanu kuphela ezingagcinwa ngamamitha ayizikwele ezikhungweni zezinkukhu noma izindlu. Leli nani liyehla ngezinkukhu eziyishumi ezikhudlwana ngemitha yendawo (square meter).
izindawo lapho izinyoni zikwazi ukuphumula khona-ke, kufanele zinikezwe ngaphezu kwamasentimitha ayishumi nanhlanu ngenkukhu ngayinye futhi kufanele zifake umgamu ongaphansi kwe-1,5 cm ukuvumela izinkukhu ukuba zibambe amagatsha ngaphandle kokulimaza izihluthulelo zazo, ngokusho ikhodi yokuziphatha ngokuphathelene nezinkukhu ezikhulayo namaqanda(Pullet Rearing and Table-egg Code of Practice)
Kumele kube nezindawo zokudoba okwanele ukudikibala izinkukhu ezibeka amaqanda ngokubeka amaqanda phansi. Lapho kukhona amabhokisi akhethiweyo, kufanele kube khona isidleke esisodwa ngezinkukhu eziyisishiyagalombili nalapho izidleke zomphakathi zihlinzekwa khona, okungenani imitha eyodwa yesikwele esidlekenikufanele ibe nezinkukhu ezingu-125. Izinkukhu ezibeka amaqanda kufanele zithole ukukhanya okwanele: Ubuncane bamahora ayisishiyagalolunye ukukhanya okuqhubekayo ngendlela yobusuku noma ukukhanya okufakelwayo, esikhathini ngasinye samahora amabili namane kanye nesikhathi esincane samahora ayisishiyagalombili ubumnyama.
lapho ukhiqiza izinkukhu zokubeka amaqanda noma izinkukhu zokudla, akufanele kube ngaphezu kweyodwa inkukhu ngamamentimitha amahlanu wesilinganiso sokudla kungase kuhlanganiswe uma usebenzisa uchungechunge, umgogodla noma ibhokisi lokudla elingatholakala kuzo zombili izinhlangothi. Amapentimitha ayishumi ngenkukhu ngayinye kufanele anikezwe uma kuphela uhlangothi olulodwa olufinyeleleka. Uma ipani inoma amashubhu okudla kusetshenziswa, izinkukhu ezingamashumi amane ezikhulile kuphela zingondlwa ngondla owodwa.
Amakhodi achaza izimo ezifanayo zangaphandle zemvelo lapho ukhuluma ngezinkukhu ezifuywa zingavalelwe kanye nezifuyelwa umkhiqhizo wamaqanda: Ukugcinwa kwezinyoni ngaphandle kwendlu noma ukuchithwa, akufanele kudlule izinyoni ezinhlanu ngamamitha ayizikwele.
Ukubiwa kwezilwane kuvimbela ukukhiqizwa okubanzi kwezinkukhu ngokusho kwenhlangano yezinkukhu eNingizimu Afrika. IIndawo engaphandle kwalapho izinyoni zigcinwa khona, kufanele igcinwe ukuze kuvunyelwe ubuncane bezitshalo eziphilayo ezingamaphesenti angamashumi amahlanu ngaso sonke isikhathi.
Ukudla okunengqungquthela kuzosiza ekulawuleni umhlaba owonakele futhi kuncishiswe ingozi yokwakhiwa kwezinto eziphila ngokudla emzimbeni wenye into.
Izinyoni kufanele zifinyelele emthunzini, kungaba ngesimo semithi noma isakhiwo sokufakelwa, ngesilinganiso samamitha ayisishiyagalolunye somthunzi ngezinyoni eziyizinkulungwane.
Izinyoni kufanele futhi zibe nokufinyelela kwendwangu futhi kufanele kube nesithango esanele sokuzivikela ekudleni. eziyizinkulungwane eziyizinkulungwane. Izinyoni kufanele futhi zibe nokufinyelela kwendwangu futhi kufanele kube nesithango esanele sokuzivikela ekudleni.
Abalimi basebenzisa izinhlangano ezizimele ukufakazela umkhiqizo wabo njengowemvelo. Ngayinye yalezi zinhlangano inezidingo zayo zokukhiqiza. Kodwa-ke, ngokuvamile, ukukhiqiza kumele kufaneleke ukuba ngokwemvelo uqobo, ngaphandle kokusebenzisa umquba wamakhemikhali noma izibulala-zinambuzane.